Lotaya Archives - Page 195 of 234 - Lifestyle Myanmar
Home Category Lotaya
စင်ကာပူကိုသွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အခါ ကုန်ကျစရိတ်နည်းနည်းနဲ့ အပန်းဖြေနိုင်မယ့်နေရာများ
စင်ကာပူနိုင်ငံက သာမန်လူတစ်ယောက် သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ဆိုတာ အင်မတန်ဈေးကြီးလှပါတယ်။ သေးငယ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမယ့်လည်း အမေရိကားနည်းတူ ဈေးနှုန်းတွေအင်မတန်မြင့်တာကြောင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဥ်မယ်ဆိုရင် အများကြီးဈေးကြီးတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်သွားတာဆိုရင် သိပ်ပြီးပြဿနာမဟုတ်နိုင်ပေမယ့် ရက်အကြာကြီး ခရီးထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ တွေးရင်းနဲ့ကို တွန့်ဆုတ်သွားနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်က မရောက်ဖူးသေးလို့ စင်ကာပူကိုတော့ တစ်ခေါက်လောက်ဖြစ်အောင် သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Budget ချွေတာပြီး လည်ပတ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ၁။ မြေအောက်ရှော့ပင်းမောလ်တွေမှာ အပန်းဖြေပါ...
အလုပ်တွေအရမ်းများပြီး အလုပ်ဒဏ်ပိနေတဲ့ အချိန်မျိုးမှာတောင် အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ မန်နေဂျာတစ်ယောက်ကို ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းက လူတော်လို့ သတ်မှတ်တတ်ကြပါတယ်။ သူတကယ်အေးဆေးတည်ငြိမ်တာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင် လူတွေက သူ့အပေါ် အဲဒီလိုထင်တတ်ကြတာဟာ သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကြောင့်ဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲရာမှာ ဖိအားတွေအရမ်းများတဲ့အချိန်မျိုးဆို ခေါင်းဆောင်က ပြာယာခတ်နေပါက ကျန်တဲ့ အောက်လက်ငယ်သားတွေပါ ဘာလုပ်လို့ဘာကိုင်ရမယ်မှန်း မသိဖြစ်တတ်ပြီး လုပ်ငန်းနှောင့်နှေးမှု ပိုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ယခုလက်ရှိမှာ ဦးစီးဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် မဖြစ်သေးရင်တောင် နောင်တစ်ချိန်မှာဖြစ်လာနိုင်တာမို့ အလုပ်တွေအရမ်းဖိစီးမှုဖြစ်လာခဲ့ရင်...
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူတွေ သိဖို့လိုတဲ့ “အစာစားချင်စိတ် အသက်အရွယ်” (၇)ဆင့် အကြောင်း
စားသုံးမှု တိုးလာခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တတ်လာခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လူတွေမှာ အသက်အရွယ်လိုက်ပြီး အစာစားချင်စိတ် အပြောင်းအလဲတွေ ရှိကြောင်း သိရပါတယ်။ မတူညီတဲ့ stage တွေကို သိရှိထားခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစားအသောက်ပုံစံကို တိုးတတ်စေပြီး ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းကဲ့သို့သော ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းနိုင်စေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်နှင့် သင်ချစ်ရသူတွေရဲ့ အဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ကျန်းမာစွာ နေနိုင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့...
Budget ချွေတာပြီး ခရီးသွားချင်သူတိုင်းအတွက် အထူးသင့်လျော်ဆုံးသော နေရာများ
ကမ္ဘာလောကကြီးမှာ သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်မယ့် ဈေးကြီးတဲ့နေရာတွေပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှာရင်ရှာတတ်သလို ဈေးနှုန်းသင့်တင့်လျှောက်ပတ်မှုရှိတဲ့ နေရာတွေလည်း အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုတိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ် Budget ပေါ်မူတည်ပြီး သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်တဲ့နေရာတွေက အမြဲတမ်းရှိပါတယ်။ ကိုယ်အရင်တုန်းက ဈေးကြီးတယ်လို့ ထင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေတောင်မှ လှည့်ကွက်လေးတွေ သိမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံအများကြီးကုန်ကျမှာကို စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ ခရီးသွားနိုင်ပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် နေရာဒေသတွေဟာဆိုရင် ပြည်ပခရီးစဥ်သွားချင်ပေမယ့် ဈေးကြီးမှာစိုးလို့ ပြည်တွင်းပဲလှည့်သွားနေရတဲ့ ခရီးသွားများအတွက် အထူးသင့်တော်မယ့် နေရာလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့...
သာမာန်လူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက အရူးတွေရဲ့ ကောင်းမွန်သာလွန်နေတဲ့အချက်များ
ကမ္ဘာကြီးမှာ လူရူးတွေများပါတယ်။ သူများမတွေးတာတွေ တွေးကြ၊ လုပ်ကြ ကိုင်ကြ၊ ဖန်တီးကြ ဖျက်ဆီးကြနဲ့ အချို့သော လူရူးတွေဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ကောင်းကျိုးပြုပြီး၊ အချို့သောလူရူးတွေကတော့ ကမ္ဘာကြီးကို ဖျက်ဆီးလိုစိတ်သက်သက်၊ လူနေမှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖျက်ဆီးဖို့သက်သက် မွေးဖွားလာတာလို့ပြောရမလိုပါဘဲ။ လူရူးတွေလို့ဆိုရာမှာ စိတ်ပေါ့သွပ်သူတွေကို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သာမာန်လူတွေထက်ထူးလို့ ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ အရူးလို့ သမုတ်ခံရတဲ့လူတွေကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ သာမာန်လူတွေမတွေးတတ်ကြတဲ့ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေရဲ့နောက်ကွယ်ထိ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းတွေးကြပါတယ်။...
သင့်အီအီး အရောင်တွေက ပြောပြနေတဲ့ အနီရောင်အဆင့်ကျန်းမာရေး သတိပေးချက်များ
ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ရေးရမှာတော်တော်စဉ်းစားရပါတယ်။ ဆွေးနွေးရမှာတောင်မသင့်တော်တဲ့ခေါင်းစဉ်လို့ထင်စရာပါပဲ။ တခြားသူတွေအတွက် ဒီခေါင်းစဉ်က ရယ်စရာကောင်းချင်ကောင်းနေမှာဖြစ်သလိုရွှံစရာကောင်းချင်လည်းကောင်းနေပါတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ပက်သက်ပြီး ဘယ်သူမှအလေးအနက်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းမရှိပေမယ့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အမှန်တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့စွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့မစင်တွေကတစ်ဆင့် ခန္ဓာကိုယ်ထဲက အဆိပ်နဲ့ ရောဂါဖြစ်စေတဲ့ကပ်ပြားကောင်တွေကို သဘာဝကျကျဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ ဒါကလူတိုင်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီအကြောင်းကိုပြောဖို့ ဘာကြောင့်ရှက်နေရမလဲ? သိပ္ပံပညာရှင်တွေအနေနဲ့ဆရာဝန်တွေက လူတွေရဲ့ အူလမ်း ကြောင်းကျန်းမာရေးအတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကစွန့်လိုက်တဲ့ အီအီးတွေအကြောင်းကိုလည်းပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးဟောပြောနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အီအီးတွေကိုဘယ်လိုအမျိုးအစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရမလဲသိမလား? သင့်ရဲ့အိမ်သာတက်တဲ့အလေ့အကျင့်ဟာ သင့်ကျ န်းမာရေးကိုဘယ်လောက်ထိ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာ သိလား?ကျွန်တော်တို့...
ဘ၀အဓိပ္ပာယ်တွေကို ရှာဖွေနိုင်မယ့်နည်းလမ်း (၆) သွယ်
''ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲ'' ''ဘ၀ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က ဘာလဲ'' ''ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် ရပ်တည်ရှင်သန်နေတာလဲ'' ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ဒီမေးခွန်းတွေကို မရေမတွက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းပေါင်းစုံနှင့် ဖြေဆိုခဲ့ကြတယ်။ ပြီးတော့ ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အဖြေကို ကျွန်တော်တို့ရှာနေကြတုန်းပါပဲ။ အမှန်တရားက ဘ၀ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့အရာတွေရဲ့ တစ်စိတ်တပိုင်းပါ။ ခိုင်မာတဲ့အဖြေတစ်ခုမရှိခြင်းက ၎င်းကိုရှာဖွေရတာ မထိုက်တန်ဘူးလို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘ၀ဆိုတာ ဘာလဲလို့ ရှာဖွေခြင်းက လူတစ်ဦးချင်းစီမိမိကိုယ်တိုင်စတင်ရမယ့်ခရီးတစ်ခုပါ။ လူတစ်ဦးချင်းစီက မိမိတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘ၀၊ ထူးခြားစွာဖြည့်ဆည်းရမယ့်အဖြကို သိဖို့လိုပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့...
မျောက်စိတ်လို ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေလုပ်တတ်တဲ့ အပြုအမူ ၄ ခု
တကယ်ကတော့မျောက်စိတ်ဆိုတာတင်စားထားတာပါ။ လူတွေပြောတတ်ကြတာရှိပါတယ်။ စိတ်ခနခနအပြောင်းအလဲမြန်တယ့်သူတွေ ခုတစ်မျိုး တ်ောကြာတစ်မျိုးဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို ဆေးပညာအရ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မတည်ငြိမ်တဲ့သူတွေကို တချို့လူတွေက "မင်းကမျောက်စိတ်ပဲ"လို့ပြောတတ်ကြပါတယ်။ တကယ်ကတော့ သူတို့ကသနားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ကစိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တယ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတာဟာ သူတို့ရဲ့ငယ်ဘဝနဲ့ဆက်စပ်နေလို့ပါပဲ။ကဲ..သူတို့အကြောင်းလေးတွေအောက်မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင် ဘာကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်ရတာလဲ(Emotional unstable) စိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ မတည်မငြိမ် (Emotional unstable)ဖြစ်ခြင်းဟာ လူတစ်ယောက်အတွက် တော်တော်ကြီးမားတဲ့ ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုပိုင်းဆိုင်ရာမတည်မငြိမ်ဖြစ်ခြင်း ဟာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးပိုင်းဆိုင်ရာချို့တဲ့မူမမှန်ခြင်းတစ်မျိုးလည်းဖြ စ်သလို ဲဒီလိုလူတွေဟာ ကလေးဘဝကစိတ်ဒဏ်ရာ၊...
အသက်(၃၀)အရွယ်မှာ CEOတစ်ယောက်အဖြစ် လုံး၀အောင်မြင်လာနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
တကယ်လို့များ သင့်အနေနဲ့ တစ်နေ့မှာအောင်မြင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကို ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမယ်လို့ အိပ်မက်မက်ခဲ့ဖူပါသလား။ မက်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် သင့်မှာ အစီအစဥ်အတိအကျမရှိဘူးဆိုရင်တောင် သင့်အိပ်မက်ကိုအကောင်းအထည်ဖော်နိုင်မယ့် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မယ့်အခွင့်အလမ်းတွေများစွာ ဒီနေရာမှာရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဒီကနေ့မှာ CEOတစ်ယောက်ရဲ့ အသက်မွေး၀မ်းလမ်းကြောင်းကို မျှ၀ေပေးမှာပါ။ ဒီတော့ သင့်မှာ ဒီလိုအရည်အချင်းတွေရှိနေရင် သေချာပါတယ် CEO ရာထူးဆိုတာ သင့်အတွက်ပါပဲ။ ၁။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် စိတ်အားထက်သန်မှုကို ရှာပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ CEOတစ်ယောက်ရဲ့...
FAဘဝနဲ့ပဲ တသက်လုံး အရိုးထုတ်သွားတော့မယ့် သူဆိုတာ ပြနေတဲ့ လက္ခဏာ ၁၀ ချက်
FAအကြောင်းပြောတော့မယ်ဆိုတော့FA နဲ့Single ကမတူဘူးဆိုတာအရင်ဆုံးပြောပြချင်ပါတယ်။ Singleဆိုတာက Relationshipတစ်ခုမရှိခင်ကြားကာလဖြစ်ပြီးတော့ FA(Forever Alone)ဆိုတာကတော့RSတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေတဲ့သူတွေပါ။ FAဆိုတာက RSတိုင်းနဲ့အဆင်မပြေလို့ သဟဇာတမဖြစ်လို့ FAအဖြစ်ပဲ နေသွားရတော့တာမျိုးပါ။ တချို့ကတော့ FA Is The Bestအော်ပြီး ရည်းစားတော်တော်လေးလိုချင်တယ် ရလာတော့လည်းခနပဲဆိုတာမျိုးပေါ့။ ခုပြောပြချင်တာက FA ဘဝနဲ့တသက်လုံးအရိုးထုတ်သွားမယ့်လူတွေဆိုတာပြနေတဲ့လက္ခဏာတွေကိုပြောပြချင်တာပါ။ ကဲ..ဖတ်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်… အိပ်ချင်သလိုအိပ်ထချင်တဲ့အချိန်မှာထ FAဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းထဲမှာ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အိပ်စက်ခြင်းကို ခုံမင်နေတာလည်းပါပါတယ်။ အိပ်ရာ အလယ်ရောက်လိုက် ခြေထောက်က...
Page 195 of 234 Prev 1 … 194 195 196 … 234 Next